Blogging | Narendra Raule
Blogging October 10, 2016
नरेन्द्र रौले केबलकार चढ्न अब मनकामनासम्म धाइरहनु पर्दैन । थानकोटस्थित चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले ३८ वटा केबलकार सञ्चालनमा ल्याएको छ । थानकोटबाट केबलकारमा केवल ९ मिनेट हिँडेपछि चन्द्रागिरि पुगिन्छ । राजधानीबाट केही घण्टाको दूरीमै अब यो…
नरेन्द्र रौले जब दसैं नजिकिँदै जान्छ, तलेजु भवानी मन्दिरका पुजारी उद्धव कर्माचार्यको व्यस्तता पनि उति नै बढ्दै जान्छ । नबढोस् पनि किन ? अरू बेला सर्वसाधारणका लागि सधैं ढोका बन्द हुने हनुमानढोकास्थित तलेजु मन्दिर दसैंताका…
Blogging June 3, 2016
नरेन्द्र रौले नायिका झरना थापा बिहान ७ बजेतिर ब्युँझन्छिन् । सुटिङका लागि निस्कनुपर्दा ६ बजेतिरै बेड छोडिसक्छिन् । उठेपछि मनतातो पानी पिउनु, देउतालाई जल चढाउनु, कालो चिया पिउनु, काँचो चना टोक्नु, फिट्नेसका लागि लाजिम्पाटस्थित एक…
Blogging May 27, 2016
– नरेन्द्र रौले जापान आर्थिक समृद्धि र विकासमा तीव्र फड्को मार्दैछ । अध्ययन र कामको खोजीमा त्यहाँ जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । जापानस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार त्यहाँ झन्डै ६० हजार नेपाली छन् । लामो…
नरेन्द्र रौले विश्वकै दोस्रो ठूलो देश हो, क्यानाडा । पूर्वी क्यानाडाको न्युफाउन्डल्यान्डदेखि ब्रिटिस कोलम्बियासम्म फैलिएको क्यानाडामा नेपालीहरू विभिन्न पेसा वा व्यवसायमा संलग्न छन् । ओन्टेरियो, अलबर्टा र ब्रिटिस कोलम्बियामा नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास छ ।…
Blogging May 22, 2016
नरेन्द्र रौले उनको बनाएका पेन्टिङहरु देख्दा आहा ! नभन्नेहरु कमै होलान् । जब उनी गीत गाउन थाल्छन्, सबैलाई लठ्ठ बनाईदिन्छन् । सुनिरहुँ लाग्छ । र, उनले कोरेका कविताहरु पनि उस्तै मार्मिक हुन्छन् । सुन्दा…
Blogging May 18, 2016
नरेन्द्र रौले वैशाख २६, २०७३- संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) तुलनात्मक रूपमा अन्य खाडी मुलुकभन्दा सुरक्षित र शान्त छ । रोजगारीका लागि युएई पुगेका हजारौं नेपाली विभिन्न पेसा र तहमा कार्यरत छन् । युएईमा कार्यरत नेपालीहरूको…
Blogging May 13, 2016
नरेन्द्र रौले के गर्दै छिन् नायिका श्वेता खड्का ? कसरी बित्दैछ उनको दैनिकी ? आममानिसको मनमा कौतूहलता छ । विवाह गरेको दुई महिनामै जीवनसाथी गुमाएकी श्वेता गहिरो पीडा लुकाएर जिइरहेकी छिन् । त्यो अकल्पनीय क्षतिपछि…
Blogging May 6, 2016
नरेन्द्र रौले ‘हेलो नरेन्द्र ।’ मोबाइल उठाउने बित्तिकै बोली सुनियो । दाङको यात्रामा छु । उत्साहित मनमा दुईटा कुराले डेरा जमाएका छन्, रिर्पोटिङ र घुमफिर । एयरफोनमा मीठा गीतहरु गुन्जिरहेका छन् । काठमाडौंबाट रफ्तारमा गुडिरहेको…
Blogging April 22, 2016
कुवेतका नेपालीहरुको कथा
नरेन्द्र रौले कुवेत रोजगारीका लागी राम्रो गन्तब्य रोजगारीको लागि कुवेत निकै राम्रो गन्तब्यमा पर्छ । त्यही रहरले म पनि नुवाकोटको देउरालीबाट ५ वर्षअघि कुवेत पुगें । कुबेतमा नेपाली संघ, सँस्थाहरु पनि निकै क्रियाशिल रहेको हुनाले…